Maanso cusub oo la magac baxday :BULSHOOY DHAQAN BEEL DHEH,waxa tiriyay Abwaankii waynaa ee , Yusuf Roobleh Xirsi (Sandoon)
Gabayaagu waxa uu wax badan tilmaama ama uu hogo'tusaaleyaa bulshadiisa,isaga oo si taxadar-leh farta ugu fiiqaaya hadba halka uu isleeyahay dhaliil iyo hag'rasho ayaa ka jirta;waana mid lagu yaqaano Abwaanada iyagu sida toolmoon had iyo goor ula socda bulshadoodu halka ay hadba ka liidato.
Maansadan waxaa tiriyay Abwaan Yusuf Roobleh Xirsi (Sandoon) .Abwaanku waxa uu si kooban oo hal abuurnimo ku dheehan tahay maansadan kula talinayaa, Madaxda iyo hogamiyayaasha dalka,isaga oo hadba tilmaamaaya halka uu isleeyahay in wax la dhiso ayay ku haboon tahay,kana digaaya in ay madaxdu noqoto, kuwo iyagu dadka ka shaqaysta,balse aan u shaqaynin.
Waxaanu yidhi Abwaanku:
Dhulaan biyo oollin
Dhallaan ku harraaday
Ninbaa beri dhaami
Nin awr ugu dhiibey.
Markuu la dhaqaaqay
Dhabbaa kula daalay
Ayuu dhexda seexday
Awrkii dhacan oo lun
Dhurwaana cun mooyi.
Dhiggiisa waxaa ah
Ninkii lagu dhoobay
Masuulka ku dhaartay
Sinnaan ku dhaqmaayo
Markuu dharab kayn leh
Dhexdeeda ka toosay
Hadduu dhugan waayey
Dhegaa ka furaystay
Dadduu ka dhaqaaqay
Bulshooy dhaqan beeldheh.
Dhalaal uga muuqday
Intuu u dheg taagay
Tahriib u dhaqaaqay
Dhulkooda ka yaacay
Badaa ku dhammaaday
Masuul dhugan waayey
Miskiin dhinac jiifa
Dhibkiisu u muuqdo
Intuu u dhawaado
Jalkiina la dhaafay
Caleenta ku dheehan
Bur dhuub iyo doogleh
Dhabtuu ka hadlaaye
Xumaan ha u dheehan
Samaanta ka dheego
Dheel dheel talo seegga
Jidkuu Dhahar eeday
Dhabbii dib u raaca
Ku dheel ummad maaha.
Dhashaada cun maaha.
Badh jeelka dhig maaha.
Dhurwaa noqo maaha.
Lafaa dhilo maaha.
Bukaan dhakhtar jiifa
Jalkooda dhan maaha.
Hantida ka dhaxaysa
Dhacoo gurta maaha.
Dadkoo dhaxan jiifa
Dhagxaanta ku seexda
Sardheer dhiso maaha.
Dhakool keli maaha.
Masuul dhaban daade
Qabiilo ku dhuunte
Dhankiisa ka hooste
Lugtuu dhudhub haysto
Ku soo dhufo maaha.
Kanay u dhinteene
Ha dheeliyo maaha.
Waxaa tiriyay Abaanka wayn ee Somaliyeed .Yusuf Roobleh Xirsi (Sandoon)
Somalidu Qoraalka dheer maxay ayay u neceb tahay ?...
Isu-eekaanshaha Amiir Axmed Cabdi Godane(Shabaab)...